Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » गजलकार ऋषि शर्मा सुदामा र गजल
गजलकार ऋषि शर्मा सुदामा र गजल
२०७७ मङ्सिर १० गते बुधबार ०१:०४
हुन त बडाहरूमा मात्र समस्याहरूको जमाब हुन्छ । फगत कमजोर भयौँ हामी हामीमाथि दबाब हुन्छ।। बयान लिने दिने थलो अविलम्ब फेरियोस् श्रीमान्। यहाँ भट्टीमा सत्य हुन्छ र अदालतमा नकाब हुन्छ।। गजलका यि शेरहरु गजलकार ऋषि शर्मा सुदामाका...
हुन त बडाहरूमा मात्र समस्याहरूको जमाब हुन्छ ।
फगत कमजोर भयौँ हामी हामीमाथि दबाब हुन्छ।।
बयान लिने दिने थलो अविलम्ब फेरियोस् श्रीमान्।
यहाँ भट्टीमा सत्य हुन्छ र अदालतमा नकाब हुन्छ।।
गजलका यि शेरहरु गजलकार ऋषि शर्मा सुदामाका हुन गजलको प्रारम्भिक छनौट, शशक्त रचना तथा समालोचना गर्नमा निकै सिपालु उहाँ गजल्को मलजल गर्नमा सदासर्बदा प्रतिबद्ध–कटिबद्ध स्रष्टा हुन् । २०५९/०६० देखि गजल लेखनमा निरन्तर सक्रिय रहनुभएका उहाँ देशका विभिन्न भुभागमा हुने कार्यक्रममा आफुलाइ चिनाइ सकेका गजलकार हुन । अग्रज देखि अनुजसम्म निकै निकट मानिने उहाँका गजलका शेर सुन्दा जोकोही एकछिन मौन हुन्छन अनि निकाल्छन मुखबाट वाह क्याबातको आवाज । माथिका शेरहरुले के कुरा स्पस्ट दर्शाउँछन भने उहाँका गजलमा सामाजिक बिषयबस्तु र समसामयिक परिस्थिति सहजै पाउँन सकिन्छ ।
निरीह छौँ विवश छौँ भगवानहरूलाई भगवान मान्न।
भगवानको भने भक्तमाथिको नियत सधैं खराब हुन्छ।
यो शेरमाथिकै गजलको अन्तिम शेर हो । यो शेरलाइ जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ, यो शेरले जोकसैको पनि मनमस्तिष्क एकछिन भएपनि हलाएरै छोड्छ । सामान्यतया यो शेरले मानिसको आस्था र भगवानप्रतिको दर्शनको बारेमा बोलेपनी यसले हरेक क्षेत्रलाइ इकिंत गरेको पाइन्छ ।
गजलकार ऋषि शर्मा सुदामाका गजलको अन्तर्वस्तु एकै खालको कदापि छैन । जीवन भोगाइका अनेक किस्साहरु, सामना गरेका परिस्थिति, अनेक स्थिति वा अवस्था, अनेक उकाली–ओरालीका अनेक अनुभूतिलाई ढालेर भिन्न स्थान, समय र परिस्थितिमा उनका गजलको रचना भएको पाइन्छ । उहाँका गजलले सामाजिक बिकृतिमाथि कडा प्रहार गर्छन, उहाँका गजलले देश मात्र सम्झदैनन देशसँगै देशसँग गरेका अनेक घात पनि सम्झाउँछन, देश हाँक्नेहरुलाइ पनि उहाँका गजलले निकै सम्झेका हुन्छन ।
गएछन जानेहरूले अवस्था नाजुक छोडेर गएछन
जान्न भन्नेहरुले पनि त मुलुक छोडेर गएछन
मध्यरातमा बास माग्न आएका थिए पुजारी
जाँदा घरको ढोकामा बन्दुक छोडेर गएछन
खालेबाट स्वाहा पारे महारथिहरुले यो देश
कुन बेला कुन प्रभुले कस्तो छुक छोडेर गएछन
लाएथे साधुहरुले चक्कर यो बस्तिमा लाएथे
ढुकुटी सारा लुटेछन सन्दूक छोडेर गएछन
कसले बोलाएर आएथे ती दशै र तिहार
मेरा बाबुको सिरानिमा तमसुक छोडेर गएछ्न ।
यो गजलले मान्छेलाई कति सम्म भावुक बनाउँछ भनेर कसरी भनौं यो गजलमा गजलका शेरहरुलाइ काल, देश र स्थितिलाई सटिक र कलात्मकरुपमा पेश गरि भावमा ढालेको पाइन्छ ।
दाङका:गजलकार ऋषि शर्मा सुदामाका गजलसँग अपरिचित नेपालमा गजल लेख्नेहरु सायदै छैनन । गजल युवाहरुको प्रेमालय र सायरीको रुप होइन गजल पनि बिचारका सागरहरु पोख्ने माध्यम हो भने पुस्ठ्याइ गर्छन उहाँका गजलले ।
कैयौं निर्धा आवाजहरु डराएको हुनुपर्छ
यत्ती कुरा तिमिले नि थाहा पाएको हुनुपर्छ
उ आगो ननिभाएर सरकारसँग राहत माग्न पुग्यो
लाग्छ आफैले आफ्नो घरमा आगो लगाएको हुनुपर्छ
प्रेमालय र सायरीको रुप होइन भन्दै गर्दा मैले उहाँका गजलमा प्रेमका बिषयबस्तु छैनन भन्न खोजेको कदापि हैन प्रेमका बिषयबस्तुलाइ पनि निकै सुन्दर र निकै कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर गजल लेख्नुहुन्छ उहाँले, यो नै तितोसत्य हो ।
मैले जम्मै उपहारहरु फिर्ता पठाइदिए
आजभोली मेरि प्रेमिका रमाएको हुनुपर्छ ।
मलाई यो शेर निकै कलात्मक र अति नै सुन्दर लाग्छ तसर्थ उहाँ नेपाली गजलका मार्गदर्शक हुनुहुन्छ ।
विचार र भावले भरिएका पुष्ट र उत्कृष्ट गजलहरु लेख्ने गजलकार सुदामा अपा मुकुन्द प्रज्ञा पुरस्कार २०६७, मध्यपश्चिम गजल सम्मान साथसाथै देशका विभिन्न स्थानका विभिन्न गजल महफिलबाट सम्मान थापिसक्नुभएको छ । उहाँको नौलो कनिका एकल गजलसंग्रह र अन्य थुप्रै संयुक्त कृतिहरु प्रकाशित छन ।
गजलकार सुदामालाइ साहित्यिक सफलताको शुभकामना ।
अन्तमा उहाँका केही गजलहरु
आविष्कारहरू वैज्ञानिकका फरक छन् कविका फरक छन्।
निधार फरक छन् तिनीहरूका लगाइदिने टीका फरक छन्।
पुस्तक बन्न नसकेको पाण्डुलिपि भयो यो देश पनि
पङ्क्तिपिच्छे अक्षर फरक छन् पङ्क्तिपिच्छे डिका फरक छन्।
आऊ ! प्रेमको सार्वभौम परिभाषा स्थापित गरौँ अब
यहाँ हरेक यात्रामा प्रेमी फरक छन् प्रेमिका फरक छन्।
एउटा कथाको अन्त्य नहुदै अर्कै कथाको सुरुवात हुन्छ
रङ्गमञ्च उहीँ हो यहाँका नायक नायिका फरक छन्।
तिमी एकदिन खादा लगाउँछौ म दिनहुँ नङ काटिदिन्छु
तिमी र मैले बाआमालाई सम्झने तरिका फरक छन्।
प्रयोगशालाजस्तो प्रयोगशालामा अर्कै प्रयोगको कसरत छ।
जस्तो कि खाली पानाको मुन्तिर मुखियाकै दस्तखत छ।
गरी दे डिएनए परीक्षण र बोली दे ए विज्ञान !
हाम्रो नसामा रङ्गनाथ या भीमसेनको रगत छ।
कयौं कुमारहरूको जिन्दगी सिसिफस भएर सकियो
यहाँ बस्ती बस्तीमा शिव गणेश छन् र सुमेरू पर्वत छ।
न सपारेर सपारिन सक्यो न त टालेर टालिन सक्यो
देश पनि राजमार्ग हो मर्मतको नाममा मर्मत छ।
तिमीले सुदामा देख्दैमा मलाई कुनै खेद छैन
यो छाती राष्ट्र बैङ्क हो जहाँ आमाको माया बचत छ।
खोज तथा लेखन हरिश जोशी
प्रकाशित मिति १० मंसिर २०७७, बुधबार १३:०४